Wednesday July 31, 2019 - 09:10:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Imaaraatka Carabta ayaa si kulul uga hadashay ku lahaashiyaha Xukuumadda Qadar qarax bil ka hor ka dhacay magaalada Boosaaso ee dhacda waqooyi Bari dalka Soomaaliya.
Wasiiru dowlaha Wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraatka Carabta Ninka lagu magacaabo Anwar Qarqaash ayaa sheegay in warbixintii uu faafiyay Wargeyska New York Times iyo codka laga duumay safiirka dowladda Qadar uu banaanka soo dhigayo ku lug lahaashiyaha xukuumadda Dooxa qaraxyo dhowr ah oo ka dhacay magaalada Boosaaso.
Wuxuu sheegay in caddeymahan ay daliil cad u yihiin eedaymihii ay Afar dowladood oo Sacuudiga iyo UAE ugu cad cadyihiin horay ugusoo jeediyeen Qadar oo ahaa in ay taageerto waxa loogu yeero Argagaxisada.
"Dhibaatada Qadar kala dhaxaysa dariskeeda iyo caddeymaha wargeyska New York Times ee ku aaddan dhax dhaxaadiyaha iyo safiirka Qadar ee Soomaaliya waxay muujinayaan Cilaaqada Dooxa ay laleedahay Xagjirnimada iyo Argagaxisada" ayuu yiri Wasiiru dowlaha Wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraatrka Carabta.
Xukuumadda Dabadhilifka Imaaraatka Carabta ayaa ku eedaysay Qadar in qaraxii Boosaaso ee mas'uuliyadiisa ay sheegatay kooxda Daacish uu ahaa mid lagu maja xaabinayo danaha Imaaraataaka ee dalka Soomaaliya.
Wargeyska New York Times ayaa helay cod ay sirdoonno caalami ah ka duubeen Xasan Bin Xamza Bin Haashin oo ah safiirka Qadar ee Soomaaliya iyo ganacsade Qadariyaan ah oo khadka Taleefanka ku wada hadlaya waxayna ku faanayeen in koox ay saaxiiba yihiin mas'uul ka aheyd qarax ka dhacay Boosaaso oo markii dambe ay mas'uuliyaddiisa sheegatay kooxda Daacish garabka C/qaadir Muumin hoggaamiyo.
Caddeymaha Wargeyskan uu faafiyay ayaa banaanka soo dhigayay sida dowladda Qadar ay Maleeshiyaadka Daacish ugu adeeganayso si Imaaraatka Carabta uga saarto dekadda magaalada Boosaaso waxaana xusid mudan in Daacishta Soomaaliya ay dhiseen sirdoonno caalami ah si loogu daciifiyo halganka Jihaadiga ah ee dalka ka socda.